Budata Nenamark3 APK maka Android
Free Budata maka Android (20.09 MB)
Tupu ịzụrụ smartphones, ọ ga-abụ mkpebi ziri ezi ime ụfọdụ ule, ọkachasị. Nihi ule ndị a, ị nwere ike inwe echiche gbasara arụmọrụ ekwentị gị. Ngwa Nenamark3, nke ị nwere ike ibudata nefu site na ikpo okwu Android, bụkwa ngwa na-enye aka maka ịlele arụmọrụ nke smartphones.
Nenamark3, nke nwere ike nwalee onyonyo ruru 60 FPS nwere eserese 3D, na-eziga ihe onyonyo ụfọdụ na ekwentị gị. Nenamark3 na-eme ụfọdụ mgbako na ihe nkiri ndị a na-egwu na ekwentị gị ruo oge ụfọdụ. Mgbakọ ndị a na-adịgasị iche, dị ka oge ekwentị na-eme ihe nkiri, oge kpọgidere, na ịdịmma ọkpụkpọ.
Nihi nke Nenamark3 ule a na-egwuri ruo a ụfọdụ oge, ị nwere ike inwe echiche banyere ndịna-emeputa unit nke ekwentị gị. Ị nwere ike ime ụfọdụ nime ule ndị a, nke dị mkpa karịsịa maka igwu egwuregwu 3D, na Nenamark3. Ọ ga-ekwe omume iji nsonaazụ ule gị tụnyere ekwentị ndị ọzọ ewu ewu.
Nha faịlụ: 20.09 MB
Mmepụta: Nena Innovation AB